Aliexpress - online chitoro chemagetsi, fashoni zviitiko, matoyi, zvigadzirwa zvemumba
AliExpress - chitoro chepamhepo chezvigadzirwa zvinodhura izvo munhu wese anoziva
Mafoni & accessories
Computer & Hofisi
Zvishongo & Watches
Mabhegi & Shangu
Imba & Bindu, Ificha
Motokari & Magetsi
Hutano & Runako, Bvudzi
Iko hakuna Internet mushandisi asina kumboshanyira nzvimbo yekutengesa inonzi AliExpress. Iyi ipuratifomu yepasi rose yekutengesa akasiyana siyana emakambani ekugadzirwa kweChina. Iko mukana wechitoro chepamhepo ibhajeti yezvigadzirwa. Izvo hazvigoneki kuti titaure kwakakura assortment yemutungamiriri wepasi rose mukutengesa online.
Aliexpress inotengesa zvinhu kutengesa uye muhuwandu. Iyo Internet purojekiti AlibabaGroup inoonekwa seimwe yakashanyirwa webhu zviwanikwa, uye zvakare zvakasiyana mukuita kwayo (otomatiki shanduro yeruzivo rwesaiti mumitauro dzakasiyana, kuvepo kwemafirita ekugadzirisa nzvimbo, nezvimwewo).
AliExpress , unogona kutenga chero chigadzirwa chakaratidzwa pane ino saiti
Iyo sevhisi inoshandura yoga data nezve yega yega yeyunivhesiti yepamhepo kuti vashandisi vane mukana wekudzidza maitiro ezvigadzirwa, kubvunza nezvehukuru hwacho huripo, nezvimwe.
Enda kuAli Express
Chii chinonzi assortment chechitoro chepamhepo chinogadzirwa?
AliExpress catalog ine zvikamu gumi nematatu zvinoteedzana - runyorwa rwezvikamu zvinopihwa kune vatengi kurudyi,
iyo iri nyore kuwana zvigadzirwa zvinodiwa. Pakutanga kwechirongwa ndeyemidziyo yemumba, nhare, PC, zvishandiso zvehofisi uye zvinhu zvemagetsi,
sezvo ivo vari zvakanyanya kudiwa pakati pevatengi. Tenga pane AliExpress idzva nhare mamodel uye zvimwe zvinoshamisa zvetekinoroji hazvina
Pamusoro pe peji repamusoro pane bar yekutsvaga;
Mukuvapo kwezvikamu zvidimbu zvezvigadzirwa zvitsva, zvibodzwa zveminiti yekupedzisira, nezvimwe .;
Iko kwehupfumi kusarudzwa kwezvakagadzirwa nemutengo we "kusvika kumadhora mashanu."
Navigation yevashandisi veAliExpress yepuratifomu yepuratifomu mune rubles
Zvidimbu zveMedical zvinopa yekuwedzera kurongedza zvigadzirwa mumapoka akajeka. Boka re "zvese zvevana" rinogovana zvinopihwa kubva kune vanogadzira kubva kuChina, vachigadzira zvinyorwa zvidiki (maapureta, shangu, zvigaro zvemotokari, nezvimwewo).
Chinhu chinodiwa chinogona kugara chichiwedzerwa kuCart kana Chido changu. Nhamba yekutenga inogona kuve inoratidzwa kumusoro kweiyo icon kuti mushure mekutsvaga mutengi usakanganwa kuisa kodha. Aliexpress ichave inonzwisisika kubva pakushanya kwekutanga, sezvo kunyangwe vatambi vanogona kuita sarudzo yekutenda kuunganidziro ane ruzivo:
Kubhadhara uye AliExpress Maitiro Akakosha
Rimwe simba reAliExpress nzira dzaro dzakawanda dzekubhadhara. Vatengi vane mukana wekubhadhara nemakadhi ebhengi (MasterCard, Visa, Maestro) kana kushandisa magetsi ekubhadhara masisitimu. Kubhadhara nefoni mbozha uye kuendesa mari zvinowanikwawo. Kune vashanyi vatsva vechitoro chepamhepo pane huwandu hwehuwandu. mazano anokubatsira kuchengetedza pane ako ekutanga uye anotevera kutenga.
Mabhonasi ekunyoresa pane portal;
Zvidimbu zvekuisa application.
Muenzaniso wekusimudzira kwekutsvaga ndeyeAliExpress chirongwa. Iyo webhusaiti yepamutemo ine chimiro chakajeka, kufamba kuri nyore, huwandu hunoshamisa hwezvinopa kubva kuvagadziri veChinese, kurongeka kwakasarudzika kwezvinhu muzvikamu - uye iyi haisiyo runyorwa rwese rwezvakanakira wepamhepo yekutengesa yepamhepo.
Boka redu rakaenzana nevatungamiriri veInternet nzvimbo. Isu tiri sebasa rine yakasarudzika hunyanzvi kugona, izvo zvinobatsira kukurumidza kukurudzira yenzvimbo mu TOP. Chaizvoizvo garandi yemhedzisiro - kana uchinge watadza kusangana nemafiridziro yakazara mari! Rwira zvakawanda - vimba injini dzekutsvaga optimization nyanzvi!